Qorattoonni jaarmayaa fayyaa addunyaa madda weerara COVID-19 barbaaduuf jecha hojii isaanii jalqabuuf torban lamaaf bakka qofaatti of baasan keessaa ba’anii jiru. Gareen sadarkaa addunyaa kun har’a waaree booda erga hoteela keessaa ba’ee booda atoobisii koree jira.
Qorannaan sadarkaa addunyaa akka geggeessamuuf waamicha dhiyaate baatileef fudhatama kan dhabsiiste Chaayinaan amma qorattoota kanaaf daandii saaquuf waadaa seentee jirti.
Gareen kun namoota waaltaalee qorannaa, hospitaalotaa fi gabaa vaayiresiin kun keessatti argame waliin hidhaqata qaban haasofsiisuuf torbanneen hedduu fudhata jedhamee eegama.
WHOn akka jedhetti ergamni gurmuu kanaa weerara kanaaf abalutu balleessaa qaba jedhee himachuuf utuu hin taane, gara fuula duraatti weerara dhufu ittisuuf attamiin akka jalqabe adda baasuuf jecha.
Angawaan dhimma yeroo hatattamaa jarmayaa fayyaa addnyaa Maayik Raayaan jalqaba baatii kanaa akka jedhanitti nuti eenyutu balleessaa qaba isa jedhu adda baasuu utuu hin taane gara fuula duraatti nu oolchuu maaltu danda’a ka jedhuuf deebii barbaanna jedhan.
COVID-19 bara xumura bara 2019 Chaayinaa magaalaa Wuuhaan keessatti argame. Erga sana qabee uummata miliyoona 100 kan qabe yoo ta’u kanneen miliyoona 2.1 ta’u immoo galaafatee jira. biyyoonni 120 ol ta’an akkaataa vaayiresiin kun itti jalqabe adda baasuuf qorannaan walabaa akka geggeessamu yoo gaafatan mootummoonni hedduun Chaayinaan weerara kana dhaabuuf yaalii ga’aa hin goone jechuun himatu.
Dubbi himtuun White House Jane Plaskii roobii kaleessaa akka jedhanitti weerara Chaayinaa keessatti uumamee kana ilaalchisee qorannaan sadarkaa addunyaa ifa ta’e akka geggeessamu ni deggerra jedhan. Biyyoonni hedduun dhiyeesssii talallii COVID-19 ilaalchisee yaaddoo qabaachuu isaanii ibsaa jiran.